Al-shabab oo lix nin dil ku fuliyay - iftineducation.com
Al-shabab oo lix nin dil ku fuliyay
iftineducation.com – Dilka lixdan nin oo labo ka mid ah ay u dhasheen Kenya, ayaa ka kala dhacay gobolada Bay iyo Jubada dhexe ee Konfurta Soomaaliya.
Al-Shabaab dhammaan ragga ay dileen waxa ay sheegeen in ay ku heleen danbiyo ah in ay u basaaseen sirdoonada Maraykanka, Kenya iyo dawladda Soomaaliya.
Labada nin ee Kenyanka ah, ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Cabdullaahi Cabdilmajiid Faraj oo 22 jir ahaa, kana soo jeeday magaalada Mombasa iyo Jeerad Mokeeye Umambiya oo 31 ahaa isna ka soo jeeday magaalada Eldoret , waxana lagu helay sida uu sheegay qaadiga dacwadan qaadayay in ay basaasiin u ahaayeen qaybta la dagaalanka argagixisada ee Kenya, isla markaana ay ku lug lahaayeen dilal loo gaystay culimo reer Kenya ah.
Labada ninba waxa lagu toogtay meel fagaare ah oo ku taala magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe.
Afarta Soomaalida ah waxa iyaga dilkoodu uu ka dhacay tuulada Buulo Fulaay oo ka tirsan gobolka Bay.
Qaadiga Al-Shabaab ayaa sheegay in Maxamad Aadan Nuur Xasan oo ahaa 26 jir, uu fududeeyay weerarkii lagu dilay hoggaamiyahoodii Axmed Cabdi Godane oo loo yiqiinay Sheikh Mukhtar Abuu Subeyr bishii Septembar 2014kii, sidoo kalena uu ku lug lahaa duqeyn lagu dilay saraakiil magacyadooda lagu sheegay Cabdishakuur iyo Yuusuf, sidaasna dil gowrac ah lagu xukumay laguna fuliyay.
Saddexda kale ee Soomaalida ah, ayaa la kala oran jiray Muxiyadiin Hiraabe Axmed oo 27 jir ahaa, Xuseen Nuunow Nagaaye oo 36 jir ahaa iyo Xasan Diiriye Cusmaan oo 42 jir ahaa, raggan waxa lagu eedeeyay in ay u shaqaynayeen sirdoonada Kenya iyo Soomaaliya, waxana lagu xukumay dil toogasho ah isla Buulo Fuulay ayaana lagu toogtay sida ay AL-Shabaab sheegeen.
Al-Shabaab sidan oo kale tobanaan qof ayay ugu dileen deegaanada ay ka taliyaan sanadihii la soo dhaafay, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay basaasiin u ahaayeen sirdoonada dalalka ay dagaalka kula jiraan.